Dzhek Vagner: अभिनेता iyatalantlivogo एक जीवनी
हरेक राम्रो फिलिम को भारी सफलता सही चयन अभिनेता ल्याउँछ। ती मध्ये एक Dzhek Vagner छ। शानदार खेल यो प्रसिद्ध कलाकार raptures मा दर्शक जान्छ। Dzhek Vagner साँच्चै प्रतिभाशाली। केही लागि उहाँले moviegoers को विशाल नम्बरको पहिचान जित्यो छ किनभने छैन।
Dzhek Vagner। अभिनेता को जीवनी
उहाँले 1959 मा, वाशिंगटन मा जन्म भएको थियो डीसी। म एक धेरै साधारण अमेरिकी परिवार मा भयो। बुबा प्रयोग कार बेचे। आफ्नो आमा एक गृहिणी थियो। दस को उमेर मा, केटा गोल्फ को खेल मा रुचि भयो। समर्पित उहाँलाई Dzhek Vagner लगभग सबै आफ्नो खाली समय।
Gertrude नाम स्कूल मा शिक्षा कलाकार। कक्षा नेता र नेता छलफल भएको थियो। स्कूल पछि, उहाँले विश्वविद्यालय मिसौरी प्रविष्ट गर्नुभयो। अध्ययन समयमा गोल्फ पाठ हरेस गर्नुभयो। बारम्बार विश्वविद्यालय प्रतियोगिताहरु जित्यो। तथापि, विश्वविद्यालय एरिजोना को को च्याम्पियनशिप गुमाउने, त्यो खेल सबै चासो गुमाए।
1982 मा, वाग्नर लस एन्जलस गए। मूल पुस्तिका को स्थिति मा बसे। समय, म एउटा अभिनेता रूपमा साथै आफ्नो हात प्रयास गर्ने निर्णय गरे। ज्याक चाँडै पर्याप्त धेरै हलिउड निर्देशक देखेको थियो। र उहाँले धेरै रोचक प्रस्ताव प्राप्त गर्न थाले। तिनीहरूलाई को - भनिन्छ पंथ श्रृंखला मा वारेन Lockridge को भूमिका "स्यान्टाबारबारा।" आफ्नो नायक सबै उमेरका को उचित सेक्स को आम जस्तै परे।
लामो समय को लागि Dzhek Vagner साझेदार Heather Locri "Melrose ठाउँ" श्रृंखला थियो। जोडीलाई नजिक सम्पर्क थियो, र 2007 मा सार्वजनिक मा आफ्नो सम्बन्ध घोषणा। चार वर्ष पछि, कलाकार पनि संलग्नता रिपोर्ट। तथापि, छ महिना पछि तिनीहरूले parted। वाग्नर निरंतर भारी पिउने दुलही सामना गर्न सकेन। एक अधिमात्रा, त्यसपछि ज्याक आफ्नो कुरा भेला र सधैंभरि उनको बायाँ कारण महिला hospitalized थियो।
मिति, अभिनेता अभिनेत्री Kristina वाग्नर संग विवाह छ। जोडी दुई छोराछोरी छन्।
र अहिले वाग्नर ज्याक को सबै भन्दा प्रसिद्ध काम बारे थप सानो। कलाकार विश्वव्यापी ख्याति ल्याए जो साबुन, - साँच्चै ठूलो छ। तिनीहरूलाई को एक "धारावाहिक" "Melrose ठाउँ" भनिन्छ। टिभी च्यानल «फक्स» मा 1999 मा 1992 देखि प्रकाशित भएको थियो जुन फिल्म, ठूलो सफलता हासिल गरेको छ। धेरै वर्ष को लागि, Dzhek Vagner आफ्नो प्रतिभाशाली खेल टेलिभिजन दर्शक आकर्षित। आफ्नो नायक र छविमा रोमान्स र कामुकता र कालो हास्य, सामान्य मा, एक निश्चित absurdity जोडती, र। सामान्य, अभिनेता पत्रुस बर्न्स को भूमिका असफल भयो।
"बोल्ड र सुन्दर"
यो चित्र कुनै कम प्रभावशाली छ। "बोल्ड र सुन्दर" - प्रसिद्ध अमेरिकी melodrama, "को सीबीएस" मा प्रसारण 1987 देखि। के, टेलिभिजन श्रृंखला को प्रशंसक फिलिम को यो रील आकर्षित? "बोल्ड र सुन्दर" - लस एन्जलस बस्ने भएको Forrester परिवारको बारेमा एक फिलिम, र मोडेल को घर। षड्यन्त्र, चुनौतीहरू र अनपेक्षित मडारिनुहोस् एक धेरै मदत तर चलचित्र प्रेमीहरूको आकर्षित गर्न सक्दैन। प्रत्येक श्रृंखला मात्र बीस चालीस को लागि सामान्य सट्टा मिनेट रहन्छ।
"बोल्ड र सुन्दर" - एक धारावाहिक, जो सबैभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवलोकन भयो। Dominick Marone भूमिका ज्याक वाग्नर द्वारा प्ले इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, अष्ट्रेलिया र अन्य देशहरूमा टेलिभिजन दर्शकहरूलाई परिचित छ।
खैर, Dzhek Vagner मात्र एक प्रतिभाशाली अभिनेता छ "धारावाहिक।" उहाँले - ठूलो guitarist र गायक-गीतकार।
को "धारावाहिक" सम्बन्ध, वाग्नर को दिन चलचित्रमा भूमिकाको लागि जानिन्छ, र प्रधानमन्त्री समय धारावाहिक मा छ। एकै समयमा, लोकप्रियता प्राप्त एक गायक जोन्स Frisco रूपमा सुटिङ, शीर्षक एकल जारी गरेपछि «सबै म चाहिन्छ»। 1985 मा, उनले चार्ट «बिलबोर्ड हट 100" मा दोस्रो स्थानमा पुग्न सक्षम थियो यो पाँच थप स्टूडियो एल्बम लागि वाग्नर देखि कहिल्यै भयो। तर, सामान्य मा, त्यो टेलिभिजन श्रृंखला को फिलिम पालन गर्न जारी छ।
राम्रो देखिन्छ र ठूलो काया अझ गम्भीर र ठूलो मात्रा परियोजनामा star गर्न अभिनेता सक्षम भयो। तिनीहरूलाई को एक प्रसिद्ध टिभी श्रृंखला "प्रेम र रहस्य Sanset Bich" छ। ठीक छ, भक्ति परियोजनामा जेरेमी भूमिका अभिनेता को बस हैरान प्रशंसक "आवेग हत्या"। ज्याक चलचित्र "स्नान सूट" मा अभिनय गर्ने कलाकार पनि धन्यवाद दर्शक सम्झना।
सामान्य, अभिनेता धेरै charismatic र रोचक छ। उहाँले - विश्वस्त व्यक्ति। मानिसले धेरै रोमाञ्चक रोमाञ्चक चलचित्रमा देखा पर्नुभयो। यो काम आवश्यक राम्रो सिनेमा हरेक प्रेमी गर्न अपील गर्नेछ।
आदम Sandler (आदम Sandler) - कमेडी को मास्टर। Filmography र जीवनी Adama Sendlera
Dewi जोन्स र "क्यारेबियन को डाकू" को मुख्य खलनायक
Dzhin Roddenberri - अमेरिकी Screenwriter
Mithun Chakraborty: एक जीवनी "डिस्को डान्सर"
उहाँले स्टीफन राजा द्वारा उपन्यास मा खिच्नुभयो, फिल्म "द डार्क टावर" को आधिकारिक ट्रेलर जारी
"क्लिनिक": अभिनेता Sitcom
माटो बनाइएका छन् विचारहरू
"पैसा लिग": ग्राहक समीक्षाहरू
एंटीबायोटिक "उपाय": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक समकक्षों
यो एक फ्लिया जस्तो देखिन्छ? fleas को प्रकार: विवरण, फोटो
पुराना कुराहरू को मैट बनाउने
"जुरासिक पार्क 2: खोएको संसार": अभिनेताहरू, भूमिकाहरू, विषय, समीक्षाहरू र समीक्षाहरू
त्यहाँ तेस्रो विश्व युद्ध हुनेछ? तेस्रो विश्व युद्धको बारेमा भविष्यवाणी। तेस्रो विश्व युद्धमा नोस्ट्राड्रममस
सबैभन्दा सुशील हैंडबैग के हुन्
कसरी तीब्रहरू सही तरिकाले आकर्षित गर्ने?
सकेट मा थर्मोस्टेट: उद्देश्य, सिद्धान्त, नियम-सेटिङ
गहुँ groats। खाना पकाउने फरक हुन सक्छ